I-USDA Imali kunye neZibonelelo zoKhuseleko lwaseKhaya oluSodwa
ISebe lezoLimo lase-United States (i-USDA) linikela ngemali mboleko ephantsi kunye neemali kubanini-propati abanemali ephantsi kakhulu kwimimandla yasemaphandleni afanelekileyo ekuphuculeni ezithile emakhaya abo. Ngokukodwa, iNkqubo yeeNgxowa-mali zeZindlu zoLuntu kunye neNkxaso-mboleko inikezela:
Imali-mboleko kubantu abanamakhaya abanokufumana umvuzo wokuhlaziya, ukuphucula okanye ukuvuselela amakhaya abo. Imali ingasetyenziselwa ukulungisa, ukuphucula okanye ukuvuselela ikhaya, okanye ukususa izingozi zezempilo kunye nezokhuseleko ekhaya.
Izibonelelo kumakhaya asebekhulile abafanelekileyo abafumana imizi. Izibonelelo kufuneka zisetyenziswe ukususa izingozi zempilo nezokhuseleko ekhaya.
Ngubani onokufaka isicelo?
Ukuze bakwazi ukufumana iimali-mboleko okanye izibonelelo, abafaki-sicelo kufuneka:
Yiba ngumninikhaya kwaye ngokwenene uphile ekhaya;
Yiba ngummi waseUnited States okanye uhlale eUnited States emva kokuba unikezwe ngumhlali ohlala unomphela (isimo sekhadi eluhlaza);
Yiba yimali engakwazi ukufumana i-credit engabizi kwenye indawo;
Ingeniso yentsapho edibeneyo engaphantsi kwe-50% yemali engenayo yommandla; kwaye
Ukufumana izibonelelo, unokuba neminyaka engama-62 okanye ngaphezulu kwaye ube yimali engakwazi ukubuyisela umboleko wesiqhelo ekhaya.
Iyiphi indawo efanelekileyo?
I-USDA Iingxowa-mali zoLondolozo lweZindlu zoLwahlukileyo kunye neNkxaso-mboleko Inkqubo yemboleko kunye nezibonelelo zifumaneka ngokubanzi kubanini bezindlu kwimimandla yasemaphandleni kunye nabantu abaphakathi kwama-35,000. I-USDA inikeza iphepha lewebhu apho abafaki zicelo bangakhangela idilesi yabo ukuze baqinisekise ukufaneleka kwabo kwi-intanethi.
Kwinqanaba lomda, iimali-mboleko kunye nezibonelelo ziyafumaneka kuwo onke ama-50 asePuerto Rico, i-US Virgin Islands, i-Guam, i-American Samoa, i-Northern Mariana kunye ne-Trust Territories ye-Pacific Islands.
Ingakanani Imali Ekhoyo?
Iimali ezifikelela kuma-20,000 zamaRandi kunye nezibonelelo ezifikelela kwi-7,500 zama-dollar ziyafumaneka.
Nangona kunjalo, umntu oneminyaka engama-62 okanye ngaphezulu angakwazi ukufumana iimali-mboleko kunye kunye nezibonelelo ezifikelela kuma-27,500.
Yiyiphi iMigqaliselo yeMali okanye izibonelelo?
Xa kuthelekiswa nokubolekwa kwemali-mboleko yasekhaya, kunye neerhafu zemivuzo engaphezu kwe-4.5%, imimiselo ye-USDA mboleko inomdla kakhulu.
Imilinganiselo yokutsalwa kwemali ihlawulwe kwi-1%.
Imali ingabuyiselwa kwiminyaka engama-20.
Inkonzo yesigxina epheleleyo iyadingeka kwimali-mboleko ye-$ 7,500 okanye ngaphezulu. (Imirhumo yenkonzo yesihloko iindleko ezihambelana nokukhupha umgaqo-nkqubo we-inshorensi yetayitile.)
Izibonelelo zinomda wokuphila wama-7 500.
Izibonelelo akufanele zibuyiselwe ngaphandle kokuba indlu ithengiswe ngaphantsi kweminyaka engama-3.
Ukuba umfaki sicelo angahlawulela inxalenye, kodwa kungekhona zonke iindleko, umenzi wesicelo unokunikezelwa ngokudibanisa kwemboleko kunye nesibonelelo.
Ngaba zikho iifayile zokufaka isicelo?
Ngethuba nje iCongress iyaqhubeka ixhasa imali kwinkqubo yebhajethi yonyaka , izicelo zemboleko kunye nezibonelelo zingeniswa ngonyaka.
Isicelo sithatha ixesha elingakanani?
Izicelo zemali-mboleko kunye nezibonelelo ziyacutshungulwa ngendlela efunyenweyo. Amaxesha okucubungula ayahluka ngokuxhomekeka kobukho bemali kummandla wesicelo.
Ukuqalisa inkqubo, abafaki-sicelo kufuneka bahlangabezane neengcali zemboleko zekhaya zase-USDA kwindawo yabo ukuze bancede ngoncedo.
Yiyiphi iMithetho elawula le Nkqubo?
Inkqubo yokuThengwa kweZindlu zoLuntu kunye neNkxaso yeNkxaso-mali iya kugunyazwa kwaye ilawulwa phantsi koMthetho wezeNdlu ka-1949 njengoko ichitshiyelwe (7 CFR, Ingxenye 3550) kunye noMthetho osaYilwayo weNdlu HB-1-3550 - Imali-mboleko yeZindlu zoLuntu oluBodwa kunye neNkxaso-mali yeeHhovisi zeeHhovisi.
Qaphela: Njengoko imithetho engentla ifakwe kwisichibiyelo, abafaki-sicelo kufuneka baqhagamshelane neengcali zemali zekhaya lase-USDA kwindawo yabo kwiinkcukacha zeprogram yangoku.
Iimpawu zeMichiza eziQala ngeNcwadi L
Indoda yeshumi le-12 e-Texas A & M
Ngaphakathi Kwintliziyo Yomculi Umculi / Umbhali Wengoma, uFrancesca Battistelli
Yintoni Inzululwazi Ethetha Ngayo Ngokuhamba Kwezandla Nezigubungele Zomlilo?
I-Pros and Cons Cons ye-Round-School School
Imithetho kaMarphy 10 echaza iiNyaniso ezingenakulinganiswa
Upelo lweengxaki ngesiNgesi
Yintoni iWavelength yeMagenta?